Soo dejisan The Simpsons: Tapped Out 4.14.0 – Vessoft
AndroidMadadaaloCiyaarahaThe Simpsons: Tapped Out
Bogga rasmiga ah: The Simpsons: Tapped Out
Katirsan: taabtay Out – kulan xiiso leh oo ku salaysan aamusnaan katirsan filim oo caan ah. Qof ugu weyn ee ciyaarta sababay qaraxa ee warshadan taas oo horseeday in burburinta magaalada oo dhan iyo hadda hawsha ciyaaryahanka waa in la helo dadka deegaanka ka badbaaday iyo dib u dhiska magaalada. In katirsan: taabtay Out waxaa jira wax badan oo ka mid ah hawlaha dheeraad ah oo ciyaaryahanka uu ciyaaro lacag iyo doonaatka si loo soo celiyo magaalada ama iibsato waxyaabaha cusub. Inta lagu guda jiro ciyaaryahan ciyaarta ka arki kartaa sawirada shaashada aamusnaan ah gaaban abuuray foom maadda ah. Katirsan: taabtay Out awood u ku darto ciyaartoy kale oo ka Facebook ama asal liiska saaxiib iyo booqdaan magaalooyinka abuuray iyaga.
Goob xiiso ku salaysan filimka dhaceen
Shaashada aamusnaan ah Interesting intii ay ciyaarta socotay
Dad badan oo hawlo dheeraad ah
Kartida in la soo wada saaxiibbadayda la ciyaari
Soo dejisan The Simpsons: Tapped Out
Faallo ku saabsan The Simpsons: Tapped Out
The Simpsons: Tapped Out Xirfadaha la xiriira